उच्च यौन उत्तेजनाले तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी कम गर्नुस् – Nepal News
उच्च यौन उत्तेजनाले तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी कम गर्नुस्
हरेक मानिसको यौन जीवनमा केही न केही उतारचढाव हुन्छ । उच्च यौन वेगले मानिसको जीवनमा केही समस्या पनि निम्त्याइरहेको हुन्छ । मानिसहरुक आफ्नो उच्च यौनबेग सम्हाल्न नसक्दा धेरै समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । आफ्नो साथीबाट धेरै कुराको अपेक्षा गर्नु तर…”>
कयौंपटक तपाई आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्न आफ्नो साथीको मर्जीविना सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । कोहीले त बलत्कारको साहारा लिन्छन् । यदि तपाईलाइ यस्तो हुन सक्ने खतराको महसुस हुन्छ भने तुरुन्त यस्तो परिस्थितिबाट बाहिरीन आफ्नो परामर्शदातासंग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ । एजेन्सी
ट्याग्स: High Sexual Disire, sex